Dib u howl-gelinta xarumaha danta guud sidee bay qeyb uga qaadan karaan isku xirka bulshada?! | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Dib u howl-gelinta xarumaha danta guud sidee bay qeyb uga qaadan karaan isku xirka bulshada?!
Posted by: radio himilo September 12, 2017
Muqdisho – Helidda adeegyada dowladda iyo u sinnaanta xarumaha aan gaarka loo lahayn ee dowliga ah oo inta badan lagu dhisay iskaashi dadweyne ayaa lagu magacaabaa dan-guud. Si kale marka loo yiraahdo, wax walba oo kasoo hara hantida gaarka loo leeyahay ee shacbiga oo cidna aysan ka xigsan karin inta kale taas oo keensanaysa in si siman loogu intifaaco ayaa la yiraahdaa dan guud.
Previous: Chelsea iyo Barca oo doonaya laacibka Atakan Akkaynak ee